Ny Feon’ny Vahoaka: Mandraisa Anjara Amin’ny Resadresaka Manerantany Momba Ny Fiainana Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2013 23:14 GMT
Ny talata 24 septambra 2013 ny Firaisankinan'ny Feom-bahoaka no [n]anatontosa fihaonana momba ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fiainany manokana izay mifanindran-dalana amin'ny Valandresaka Iraisampirenena faha-35 ataon'ireo vaomieran'ny fiarovana ny Tahirin-kevitra sy ny Fiainana manokana. Ny Feom-bahoaka dia vondron'ny fiarahamonim-pirenena mpitondrateny nitambatra hampiroborobo ny zo hanana fiainana manokana sy ny fampidirana maodelin'ny fangaraharana, ny fandraisana andraikitra, ary ny fandraisana anjaran'ny daholobe ho amin'ny fampandrosoana ny politika mifandraika amin'ny fiainana manokana eo amin'ny sehatry ny fifandraisana nomerika. Afa-manaraka ny resadresaka amin'ny ao amin'ny aterineto amin'ny Talata avokoa ny rehetra. Manangana tetezana eo amin'ireo manampahefana izay nomena andraikitra hiaro ny fiainanao manokana sy ny tahirin-kevitrao aminao ity valandresaka ity.
Handeha mivantana an-dahatsary amin'ny aterineto sy alefa sioka ny hetsika “Ny Tahirintsika, ny fiainantsika”. Afa-manaraka ny lahatsary avokoa ny rehetra, afa-miresadresaka amin'ny alalan'ny Twitter, na mandray anjara amin'ny resadresaka amin'ny alalan'ny fisoratana anarana eto.